Gerard Pique iyo Xavi Hernandez oo qayb ka ah xiddigaha waaweyn ee u ciyaarri doona Catalonia kullanka Venezuela! | Bakool.net
Home / CAYAARAHA / Gerard Pique iyo Xavi Hernandez oo qayb ka ah xiddigaha waaweyn ee u ciyaarri doona Catalonia kullanka Venezuela!
Xulka kubadda cagta Catalonia ayaa la filayaa inay la ciyaarraan kullan xulka qaranka dalka Venezuela bishan March 25-keeda, inkastoo kooxo dhowr ah ay u diideen xiddigahooda inay ka mid noqdaan safka Catalonia, sidaas oo ay tahayna waxaa u ciyaarri doona xiddigo waaweyn.
Real Valladolid, Huesca iyo Rayo Vallecano ayaa dhammaantood u diiday xiddigahooda inay matalaan xulka Catalonia ee uu hooggaamiyo Gerard Lopez, sababo la xiriira inay kooxahani ku dagaallamayaan sidii ay kaga badbaadi lahaayeen ka dhicitaanka horyaalka La Liga, xilli horyaalka ay ka harsanyihiin wax ka yar 10 ciyaarrood.
Hase ahaatee, xiddiggan hoos ku xusan ayaa loo oggolaaday inay u ciyaarraan xulka Catalonia.
Dhowaan ayuu isaga fariistay u ciyaarista xulka qaranka Spain, balse waxa uu hadda u ciyaarri doona xulka Catalonia, xilli Barcelona ay ku tartameyso Copa del Rey, LaLiga Santander and the Champions League.
Si joogto ah ayuu kaga mid ahaa xiddigaha loogu yeerro Catalonia, waxaana tan iyo markii uu Luis Enrique iska indho-tiray xiddiggan ay kooxdiisa Real Betis u oggolaatay inuu u ciyaarro qaranka Catalonia.
Difaaca kooxda Sevilla ma uusan helin fursad wanaagsan oo uu ku ciyaarro xukunkii Pablo Manchin, waxaana kullankan uu noqon karaa mid uu qaab ciyaareedkiisa ku tuso macallinkan cusub ee Joaquin Caparros.
Inkastoo Al-Sadd ay hooggaamineyso horyaalka Qatar, sidoo kalena ay qayb ka tahay kooxaha ciyaarraya tartanka Asian Champions League, haddana waxa ay u tahay xilli ciyaareedkiisa ugu dambeeya xirfaddiisa kubadda cagta, sidaas darteed, waxa ay u noqoneysaa mid gaar ah in markii ugu dambeesay uu matalo xulka Catalonia.
Inkastoo qaab ciyaareed heer sare ah uu kusoo bandhigayo xilli ciyaareedkan kooxda Espanyol, misena looguma yeerrin qaranka Spain xiddigaha ka yar 21-sano, sidaas darteed, waxa uu ku biirri doonaa Catalonia.
Waxa uu Southampton ku qaadanayaa xilli ciyaareedkiisii afraad, waxaana kooxdiisa ay laba buundo ka sarreysaa heerka looga laabto Premier League.
Ma uusan ciyaarrin shantii kullan ee ugu dambeysay ee kooxdiisa Espanyol dhaawac uu qabay awgeed, waxaase uu isku dayi doonaa inuu wajaho qaranka Venezuela.
Xittaa kuma soo billawdo inta badan kullamada kooxda Stoke City ay ka ciyaarto horyaalka heerka labaad ee Ingriiska, balse waxa uu helay fasax ku aaddan inuu Catalonia u ciyaarri karo.
Previous: Dowladda New Zealand oo joojineysa hubka ciidamada oo ay isticmaalaan rayidka
Next: RASMI; Xiriirka kubada cagta UEFA oo ganaax garka u galisay Ronaldo. Miyuu seegi doonaa kulanka Ajax??